Halyeey kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ku dhaleeceeyay Man United lacagtii ay ku bixisay saxiixa Harry Maguire – Gool FM
Dajiye December 20, 2020
(London) 20 Dis 2020. Halyeeyga kooxaha Arsenal iyo Chelsea ee William Gallas ayaa ku dhaleeceeyay Manchester United lacagtii ay ku bixisay saxiixa Harry Maguire, kaasoo kaga soo biiray Leicester City qiimo dhan 80 million pounds.
William Gallas oo carabka ku adkeeyay in Harry Maguire uusan u qalmin lacagta lagu bixiyay inuu kaga mid noqdo kooxda Manchester United, ayaa wuxuu yiri:
“Imisa lacag ah oo ay ku bixiyeen Harry Maguire waa kaftan, waan ka xumahay, laakiin waa kaftankiisa, isagu waa Manchester United, haa lacag badan oo ay ku qarashgareyn karaan ayey heystaan.”
“Laakiin haddii aad fiiriso ciyaaryahanka, uma qalmo intaas in le’eg oo lacag ah.”
“Haddii Harry Maguire uu qiimihiisu yahay 80 million pounds, markaa ma garanayo inta uu le’eg yahay William Gallas oo meesha ugu sarreysa maraya heerkiisa ciyaareed sanadka 2020.”
“Kubada cagta way is bedeshay, kooxaha ayaa lacag waali ah ku bixinaya ciyaartoyda, waana wax aad u adag in la fahmo sida uu qof ugu bixiyo dhamaan lacagtaan hal ciyaaryahan.”
“Haddii aad tahay ciyaaryahan da’ayar ah oo ka ciyaara Premier League, oo aad sifiican u ciyaartay labo ama seddex kulan, qiimahaaga ayaa si toos ah kor ugu kacaya. Tani maahan inay dhacdo, waa inaad si fiican u ciyaarto xilli ciyaareedka oo dhan si aad ugu kordhiso qiimahaaga sidan.”
Halyeey kooxda Liverpool ah oo difaacay Mikel Arteta inkastoo ay Gunners ku dhawdahay kaalmaha loogu laabto heerka labaad